DAAWO SAWIRRO: Mid kamid ah Beelaha G.Mudug oo dooratay Xildhibaan cusub, oo kamid noqonaya baarlamaanka Puntland 2019-ka. – Puntlandtimes
DAAWO SAWIRRO: Mid kamid ah Beelaha G.Mudug oo dooratay Xildhibaan cusub, oo kamid noqonaya baarlamaanka Puntland 2019-ka.
GAALKACYO(P-TIMES) – Mid kamid ah beelaha gobalka Mudug ayaa Xildhibaan cusub u soo doortay Jamaal Carab Yuusuf Jibriil in uu noqdo Mudanaha baarlamaan ee kamid noqonaya baarlamaanka cusub ee 2019-ka lasoo xulayo, iyadoo shir guud oo ka dhacay Gaalkacyo looga dhawaaqay.
Beesha Cali Ibraahim oo waxgarad, Culumo, Siyaasiin, Dhalinyarro iyo Aqoonyahanaba leh ayaa shir ay ku qabsadeen magaalada Gaalkacyo, waxay daaha ka rogeen in Jamaal Carab ay uwakiisheen xubinimada baarlamaanka Puntland, iyagoo faray in uu masuuliyadaas si wanaagsan u guto.
Doorashadan ayaa timi markii uu Jamaal Carab ka akhriyey kulan ay beeshaasi yeesheen waxyaabaha uu qaban doono iyo Taariikh nololeedkiisa oo ay ku qanceen, waxayna sheegeen in ay dirsadeen in ay matalaan.
Waxgarad kala duwan oo hadlay ayaa bogaadiyey talaabadan, waxayna sheegeen in ay ka sugayaan Jamaal in uu wax badan ka bedelo hababkii horey beesha loogu matalayay arrimaha Mashaariicda iyo horumarka ee kasocda Puntland.
Xildhibaanka la doortay Jamaal Carab Yuusuf oo madasha ka hadlay ayaa ka mahadceliyey talaabadan, wuxuuna sheegay in uu ka shaqeyn doono Midnimada beesha, Tan Gobalka Mudug iyo guud ahaanba Puntland.
Wuxuuna cadeeyey in uu kasoo shaqeeyey 15-kii sanno ee lasoo dhaafay arrimaha ku wajahan dawladnimada Puntland.
Mr, Arab ayaa sheegay in 15ka sanno ee uu kashaqeynayay Hay’addaha caalamiga ah iyo dawladda Puntland aysan jirin xaafiis uga tagay shaqo-xumo, balse mid kasta uu maanta waxqabadkiisu yaalo, isagoo sheegay in uu sii laba-jibaari doono waxqabadka Shacabku kasugayaan.
Puntland ayaa hadda ku jirta marxaladda loolanka doorashada, gaar ahaana Kuraasta baarlamaanka, waxaana lafilayaa in baarlamaanka hadda jira la kala diro 31-ka bisha October ee sannadkan, waxaana naga xiga maalmo kooban, wixii markaas ka dambeeya loolanka ayaa gaaraya meel xasaasi ah.
kusoo dhowow xildibaanimada Puntland mudane xildibaan…. shicibka Puntland waxay kaafilayaan in aad calool u nool madaxweyne ka dhigin .